Wararkii ugu danbeeyay ee Dagaaladii Degmada Dhuusamareeb – SBC
Wararkii ugu danbeeyay ee Dagaaladii Degmada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb-Wararka ka imaanaya Degmada Dhuusamareeb ee Gobolka galgaduud ayaa ku waramaya inay xilligan degan tahay ka dib markii Dagaalo Xoogan ay ku dhexmareen Xarakada Alshabaab & Ciidamada Ahlusuna Waljameeca ay halkaasi ka dhaceen.
Degmada Ayaa xilligan waxay gacanta ugu jirtaa Ciidamada Ehlusuna oo horey halkaasi ugu sugnaa waxaana halkaasi laga saaray Ciidamada Alshabaab oo horey deegaankaasi saacado kooban weerar ku qabsaday.
Sida ay ku waramayaan Ilo wargal ah oo ku sugan Degmadaasi ayaa ku waramaya in Ciidamada Alshabaab ay horey u sii qaateen markii ay magaalada ka Baxayeen Qalabkii Idaacada Radio Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Dhinaca kale Xarakada slahabaab ayaa waxaa ay horey u sii qaateen qalabkii ay ku howlgali jiree hayadaha Samafalka ee Halkaasi ka shaqanjiray.
Ciidamada Ehluna ayaa iyana lagu soo waramayaa inay gurmadyo kala duwan ka heleen Ciidamadooda ku kala sugan Deegaanada Gobolkaasi kuwaasi oo dagaal xoogan la galay xarakada Alshabaab ee Gobolkaasi.
Weli ma jirto faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxaysa Dhinacyada halkaasi ku dagaalamay oo ku aadan khasaaraha Labada dhinac soo gaaray marka laga reebo guulo ay labada dhinac kala sheeganayaan
Ilo madax banana oo ay la xiriirtay Warbaahinta SBC ayaa ku waramaya in dagaalada shalay halkaasi ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ah Dhinacyadii Dagaalamayay iyadoo qaarkale o dagaaladaas ku dhaawacmayna la geeyay Gobo Caafimaad oo ku yaala Degmooyinka GObolka galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya
Dadka Deegaankaasi ku dhaqan ayaa waxaa ay cabsi xoogan xilligan ka qabaan in dagaalo kale ay halkaasi ka dhacaan.